नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : स्वर्गीय कौशल ज्ञवालीजीको आत्माको चिर शान्तिको कामना !
स्वर्गीय कौशल ज्ञवालीजीको आत्माको चिर शान्तिको कामना !
अर्घाखाँची, बुटवल हुँदै काठमाडौं सम्म का अनेक उतार चढावमा पनि कत्ती पनि हरेश नखाएका, सधैं इमान्दारिता र पौरखमा विश्वाश गर्ने, दु:ख सुखका हाम्रा एक अभिन्न र अत्यन्त मिलनसार, अशल मित्र, उद्योगी कौशल ज्ञवालीको असामयिक निधन भएको खबरले मुटु छिया छिया भएको छ । यस दु:खद घडीमा म स्वर्गीय कौशलजी को आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै आदरणिय भाउजु रुक्मिणी लगायत सम्पूर्ण परिवार र आफन्त जनमा हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछु । कौशल जी तपाईंको स्वर्गमा बास होस ।
- रामप्रसाद खनाल एबम समस्त खनाल परिवार
Posted by www.Nepalmother.com at 4:53 PM